Izay hahitana vola ihany no manjaka ao ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitombo andro aman’alina ny isan’ireo olona mirona amin’ny asa fivarotana amin’izao fotoana izao. Tsikaritra amin’ny fiovana lehibe misy izany raha ny ao Antsirabe no resahina, mihatery ny toerana ka feno azy ireo etsy sy eroa; hany ka hipoka hatrany amin’ny “trottoir”. Ireo mpanao hôtely indrindra no voakasik’io fihoaram-pefy io. lalana kely monja no hisisihan’ny mpandeha an-tongotra ao Antsenakely fa ny latabatr’ireo mpanao hani-masaka sy ireo mpamelatra entana amin’ny tany no mahazo laka. Toa manintona ny saina ihany koa aza hoy ny nambaran’ny olona ny ankambo ataon’ireto mpivarotra ireto satria fatana misy afon-tsaribao mivaivay no mitombona eo an-tsisin-dalana. Efa nisy olona nitobahan’ny rano mangotrak’ireo mpanam-boatra lasopy ny herinandro lasa teo, saingy mbola tsy fay ireto tomponandraikitra amin’izany ireto, ka ny tsirairay no voatery mihafy sy mitandrina manoloana io tandrevaka io. Midika izany, raha eo amin’ny lafin’ny sôsialim-bahoaka fa doroka amin’ny fiainana sy ny fivelomana ny olona, noho izany “tsy hita hifanomezan-tsiny fa samy manana ny foto-pivelomany ny vahoaka” hoy ny voalazan’ireto mpanera ao Antsenakely, amin’ny taksi-brosy zotra reziônaly ireto. Anisan’ny tondro iray hamantarana ny maha an-dalam-pandrosoana antsika eto Madagasikara ny fitsirian’ireny toeram-pivarotana madinika marobe isankarazany ireny. Ny tsenan’Asabotsy izay manara-penitra sady mankadiry mahazaka olona aman’arivony, dia tsy omby intsony ka izany no mahatonga ny ankabeazan’ireo mpivarotra sasany mitobaka ety ivelany. Tahaka izany ny ao Antsenakely. Manjavozavo ny antony tsy hisian’ny fandaminana akory, lasa baranahana fotsiny ny lalàna mifehy azy ireo, na ao amin’ny fokontany na ao amin’ny faritra. Manome vahana ny tontakely ary mampanita-tsaina io olana io rehefa tsy misy ny fanarahamaso akaiky, ka ny fangaronam-paosy sy ny mpanendaka ihany koa no hanjaka.
Ny fivarotana halatra
Voasokajy ao anatin’ny halatra avokoa ny fitaka sy ny fivarotana entana tsy mari-pototra ary tsy ara-dalàna. Zava-misy tsy zoviana amin’ny mponina eto andrenivohitr’ Vakinankaratra izany. Hahitana ny firongatr’io serasera maizina io ao Antsirabe, betsaka loatra manko hoy ny fanafatrafaran’ity raim-pianakaviana ity ny lalana hahafahan’ireo tontakely manao izany raha ny ao an-toerana amin’izao fotoana izao. Mivoatra rahateo ny fahaiza-manaon’izy ireo noho ny karokaroka amin’ny làlan’ny teknolojia, ka izany mihitsy no mamahana ny olona. Ny hariva iny no tena mibosesika ny mpandeha an-tongotra ka tery dia tery araka izany ny lalana, ary tsy ferana ny mpanararaotra amin’izany. Ambetintenin-tsika amin’ny andavanandro ilay hoe tsy misy asa ratsy, kanefa ny asa ratsy ankehitriny no miseho ary mateti-pitranga manerana ny nosy, voalaza amin’ny haino aman-jery. Ny mampalahelo, tsy mahay mifofotra amin’ny asa tsara ny ankamaroan’ireo mpametsifetsy ireo, sady mitady hanan-karena vetivety ka zary mivoana amin’ny lalana tsy izy. “Mahavonjy poritra fa tsy mahavita taona”. Sarotra velively ny hirosoana amin’ny tontolon’ny fiainana milamina sy miadana raha ny fitiavam-bola amin’ny tsy rariny no mibahana ao an-tsain’ny rehetra. Tsy mahalala afa-tsy ny an’ny tena manokana, ary mahavatra mampiasa hery amin’ny malagasy mitovy ra mba hahazoana izay hohanina anio. Miankina aminao io ny fialana amin’io toe-tsaina mirefarefa amin’ny tany io.